SomaliNet Magazine: ARRIMAHA BULSHADA - MAXAA GUURKA YAREEYAY?
Horumarka iyo ilbaxnimadu waxay jaan guuriyaan wixii hore loo yiqiin oo dhan sida dhaqanka , hiddaha, iyo suugaanta iwm.?Haddaba haddaan soo qaadano wax- yaalaha aad u yaraaday oo uu ka mid yahay guurka. Maxaa keenay inuu yaraado ama isbadalo? Dhibaatada keentay yaraanshaha guurka waxaa loo aaneeyaa dhowr waxyaalood oo ay ka mid yahiin:
waxayaalo guurka hore aan ugu jiri jirin oo lagu daray isla markaasna laga dhigay wax aad muhiim u ah sida (xafladaha)
kala doorashadii oo yaraatay (choice)
waqtigii xod-xodashada oo dheeraaday iyo kuwa kale oo badan.?
Sidaad ogsoon tihiin waxaa waddanankeena ka dhacay bur-bur, dadkeenii waxay ku nool yihiin dal shisheeye dhaqaaluhuna waa iska xun yahay marxaladaha jira oo dhan inaga oo ka duuleyna awoodda qofka guursanaya inuu galo kharash aad u badan si kastaba ha ku keenee?
Annaga oo soo qaadaneyna arrinta koowaad oo ah arrinta lagu soo daray guurka xafladda arooska oo ka duwan tii hore loo dhigi jiray kana kharash badan lagana dhigay wax khasab ah, aan soo qaato sidii xafladihii hore u dhici jireen iyo kharajka ku bixi jiray.
Xafladihii arooskii hore waxay dhici jireen hal mar oo ah (maalin iyo habeenkeed) maalintii waxaa dhici jiray nikaax iyo qadadii oo aalaaba ragga xafladiisii ahayd waxaa ku xigi jiray dumarka oo habeenkii booddo ciyaareed iyo buraanbur isku dara, isla markaas iyaga oo faraxsan aroosaddii guriga geeya. Arooskan inta rag dhalinyaro ah oo ku labisan dharkii hiddaha geesaha ka galaan fiidkii ayay guriga u hoyin jireen, sacab iyo mashxarad dabadeed aroos laguma raago lagamana raago ayaa lagu sagootin jiray. Kharashku waxa uu ahaan jiray mid aan badneyn oo ah?
Sooryo :2,000 sh.s
Qadada: 2,000 sh.s
Xafladda dumarka :600 sh.s
Alaabta guriga :3,000 sh.s
kharashka aroos aan goob joog ahaa waxa uu ahaa intaas.
Kan hadda sidee u dhacaa aan soo qaato aroosyo ka dhaca Minneapolis ama Toronto.
Kharashka aroosyadan aad ayuu u badan yahay taas oo keenta inuu qofka muddo ku qaadato ama uu awoodi waayo inuu guursado.
Waxaa laga bilaabaa sida dadkeena u caadada ah: nikaax iyo qadada waxaana la bixiyaa sooryadii sidii caadada ahayd kaddib waxaa bilowda qaban qaabo ah in dumarka ay qol weyn sharaxdaan , koox heesta loo yeero , gabadhii oo loo labisay dhar hindiyeed ama toob lana soo fariisiyo habeenkaas oo dhan halkaa lagu ciyaaro, waxaa kale oo la soo kireeyaa isalaan aad u taqaan buraan- burka iyo filin qaadeyaal, halkaas waxaa ku dhammaaday maalin iyo habeen kaddibna waxaa biloowda habeen kii galbinta , habeen kaas oo ka duwan kii hore sababtuna habeen kaan waa rag iyo dumar ( wixii dhiig lahoow kaca).
Waxaa la tagaa Hotel caan ah waxaa la soo qaataa qof kasta dharkuu isleeyahay waad ku qurux badan tahay arooska iyo aroosadda waxay qaataan dhar ka duwan ka dadka,aroosadda dhar cad-cad oo lo yaqaan (taaj) iyo ilaa lix gabdhood oo isku dhar labisan. Arooska waa dhar madoow (suit) iyo ilaa lix wiil oo ku labisan dhar kuu qabo oo kale- waxaa loo yeeraa fanaaniin caan ah inta badan la isugu faano ( aniga fannaan hebal ayaa arooskeeyga ka heesay) waxaa yimaada filin qaadayaal ku caan baxay qaadidda,ugu dambayntiina caruuska iyo caruusaddu waxay seexdaan Hotelka.
Intaa waxaa ku xiga qaban qaabo kale oo loo galo habeen loo bixiyay shaash- saar, Hotel uma badna laakiin waxaa lagu qabtaa qol weyn, sidii xafladdii hore uma weyna laakiin waa la heesaa oo qoob -ka ciyaar dumarku sameeyaan, filin qaade waa muhiim, caruusaddu waxay qaadataa dharkii mid ka duwan shaashna waa loo saaraa, maxaad u maleeyneeysaa inuu ku baxay arooskaas quruxda badan? kharashkii waa kan:
Sooryo: $1500 us
Qadada: $2500 us
Habeenka dumarka: $3000 us
Hagaajinta gabdha habeenkaas: $500 us
Hotel: $6000 us
Dharka malxiisiinta rag iyo dumar: $2000 us
Dharka caruusadda oo kaliya: $1500 us
2 faraanti $ 500 us
Keegga la jarayo: $ 200 us
Baabuurka dheer ee arooska lagu qaado (limousine) saacadii: $150 us
Kooxda heeseysa: $1500 us
Islaanta buraanbureysa: $1000 us
Filin qaade: $1500 us
Dj: $500 us
Waraaqaha Infiteeshinka: $200 us
Intaas kadib waxaa la qabtaa shaash saar maxaa ku baxa?
Hool: $1000 us
Cunto iyo cabid $1500 us
Heesaa: $300 us
Filin qaade: $500 us
Waxaa kuu cad in qof kasta oo arka kharash- kaas faraha badan iney ku qaadanayso inuu guursado wakhti aad u badan ama uu seegoba inuu guursado. Markaan aragnay kharshkii inuu ka mid noqday waxyaalaha hor taagan guurka bal aan eegno kala doorshada iyo waxay u dhintay guurka.
Kala doorashadu run ahaantii aad ayay uga fiicneyd markii la eego xaaladda dadka qurbaha, kuwii ku noolaa waddankeenii, sababatuna waa dadka Soomaaliyeed iyagaa is guursada oo uma badna ineey guursadaan dad shisheeye ah markaas waxaad halkaas ka cabiri kartaa wiilka ama gabadha ku nool Soomaaliya (inuu ama iney) ka xulasha fiicnaayeen kuwa hadda ku nool qurbaha.taas oo ay ku qaadato waqti dheer inuu naftiisa u doorbido qof uu nolosha la qeybsado, dhibaadadaas oo keenta dadka is guursadaa iney isku raagin oo uu ka bur-buro guurkaas.
Arrinta saddexaad waxay xiriir la leedahay middan hadda aan soo xusnay iyada oo xod-xodashadu (shukaansi) waqti dheer la siiyo oo aad arkeysid wiil iyo gabadh mudo dheer wada socday sida shan sano ilaa toban sano taasina ma dhici jirin waagii hore in kasta oo ay fiican tahay in waqti is barasho la helo haddana waxaa aad u xun inuu sii dabo dheeraado waxaad arkeysaa wiil iyo gabar muddo wada socday oo aad is leedahay ku waani waa ahaadeen haddana si sahal ah ku kala tagaya markaad wareysatid kuu sheegi maayaan wax la taaban karo oo ay ku kala tageen macneheedu waa waqtigii baa ku dheeraaday waana isku caajiseen maxaa yeelay waxa labada qof isku heyn kara-inta badan- waa iney is guursadaan